Ny firenena be olona indrindra eto an-tany | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | General, About us
Amin'izao fotoanan'ny areti-mandringana izao dia tadidintsika ny isan'ny olona mipetraka eto ambonin'ny planetantsika. Tsy toy izany foana, fa tato anatin'ny taonjato faramparany bahoaka efa nitombo betsaka ary manome fanamby lehibe izany.
Ny firenena be olona indrindra eto an-tany dia Sina, India, Etazonia, Indonezia, Pakistan, Brezila, Nizeria, Bangladesh, Rosia ary Mexico. Ny fanamby atrehin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny fanomezana fampianarana, fahasalamana ary asa ho an'ny rehetra. Ary tsy mora izany. Firenena be mponina ve ny firenena midadasika?
1 Firenena sy mponina
Firenena sy mponina
Mety hisy hieritreritra, saika voajanahary, fa raha lehibe kokoa ny firenena dia mihamaro ny olona monina ao. Fahadisoana voalohany. Ny haben'ny jeografika ao amin'ny firenena dia tsy misy ifandraisany amin'ny isan'ny mponina na ny isan'ny mponina. Noho izany, manana firenena goavambe toa an'i Mongolia, Namibia na Aostralia isika izay ambany olona tokoa. Ohatra, any Mongolia dia misy mponina 2.08 monja isaky ny kilometatra toradroa (ny isam-ponina dia 3.255.000 tapitrisa).
Toy izany koa no mitranga any amin'ny kaontinanta. Goavana i Afrika saingy olona 1.2 lavitrisa monja no misy azy. Raha ny marina, raha manao ny lisitry ny firenena ambany ambany ianao dia mahita fa misy firenena afrikanina folo farafahakeliny ambany ny isan'ny mponina. Inona no antony? Tsara ny jeografia. Misavoana etsy sy eroa ny tany efitra ka mahatonga ny fizarana ny mponina tsy ho vita. Ny Sahara, raha ilaina, dia mahatonga ny ankamaroan'i Libya na i Maoritania ho lao. Toy izany koa ny Efitra Namib na ny Kalahari, atsimo kokoa.
Ny Namib dia mibodo ny morontsirak'i Namibia iray manontolo ary ny Kalahari koa dia mibodo ny faritry ny faritaniny ary saika an'i Botswana rehetra. Na, mitohy amin'ny ohatra, Korea Avaratra sy Aostralia dia manana mponina mitovy aminy: manodidina ny 26 tapitrisa, saingy ... manana velarana 63 heny lehibe kokoa i Aostralia. Toy izany koa no mitranga any Bangladesh sy Russia izay samy 145 sy 163 tapitrisa ny isam-poniny, saingy ny zava-misy dia ambany dia ambany ny tahan'ny mponina ao Rosia.
Ka ndao hataontsika mazava tsara avy eo tsy misy fifandraisana tsy maintsy atao eo anelanelan'ny haben'ny firenena sy ny isan'ny olona monina ao. Fa ity ny lisitr'ireo ireo firenena 5 be mponina indrindra eto an-tany.
Mbola tadidiko fa taona vitsivitsy lasa izay dia nanoratra momba an'i Shina aho rehefa nanao fanisam-bahoaka ny governemanta. Raha any amin'ny firenen-kafa, ity asa ity dia vita ao anatin'ny iray andro, eny manahirana, fa indray andro, farany, naharitra andro maromaro izany. Androany i Shina dia misy mponina 1.439.323.776 XNUMX XNUMX XNUMX. Roapolo taona lasa izay dia somary kely kokoa izy io, miaraka amin'ny mponina 1.268.300. Nitombo 13.4% teo ho eo tao anatin'izay roapolo taona izay, na dia izany aza antenaina fa amin'ny taona 2050 dia hihena kely izy io ary eo anelanelan'ny elanelana roa.
Araka ny voalazantsika tetsy ambony ny fanamby lehibe ataon'ny governemanta sinoa dia ny fanomezana fampianarana, trano, fahasalamana ary asa ho azy rehetra. Miparitaka tsara ve ny sinoa manerana ny faritany? Tsia, ny ankamaroany dia monina amin'ny antsasaky ny firenena atsinanana Ary any Beijing, renivohitra ihany, dia misy olona 15 tapitrisa sy sasany. Ny renivohitra dia arahin'i Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqinh ary Wuhan, ilay tanàna malaza ratsy nipoiran'ny Covid-19.
Ny angona tena mahaliana momba ny mponina ao Shina dia ny ny tahan'ny fitomboan'ny isan'ny olona dia 0,37% (Misy 12.2 teraka isaky ny mponina arivo ary 8 no maty). Ny androm-piainana eto dia 75.8 taona. Andeha ho tadidintsika fa tamin'ny taona 1975 ny Politikan'ny zaza tokana ho fepetra hifehezana ny fitomboan'ny isan'ny mponina (fanabeazana aizana sy fanalan-jaza ara-dalàna), ary tena nahomby izany. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny fepetra dia nilamina tamin'ny fepetra sasany.
Ny firenena faharoa be mponina indrindra eto an-tany dia India miaraka amin'i 1.343.330.000 mponina. Niparitaka nanerana ny ankamaroan'ny firenena ny olona, ​​afa-tsy tany an-tendrombohitra avaratra sy tany an'efitra avaratra andrefana. Manana velarana 2.973.190 XNUMX XNUMX kilometatra toradroa i India ary any New Delhi fotsiny dia misy 22.654 ny mponina. Ny tahan'ny fitomboan'ny isam-ponina dia 1.25% ary ny tahan'ny teraka dia 19.89 teraka isaky ny mponina arivo. Ny fiainana andavanandro dia zara raha 67.8 taona.
Ny tanàna lehibe indrindra any India dia i Mumbai misy 20 tapitrisa eo ho eo, Calcutta misy 14.400 XNUMX, Chennai, Bangalore ary Hyderabad.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny isan'ny isan'ny firenena ao amin'ny laharana voalohany sy faharoa ary ny an'ny fahatelo. Etazonia dia firenena be mponina nefa tsy dia be loatra. Manana olona 328.677 arivo izy ary ny ankamaroany dia mifantoka amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana.
Ny tahan'ny fitomboana dia 0.77% fotsiny ary ny tahan'ny zaza teraka dia 13.42 isaky ny olona arivo. Ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia i New York izay misy olona 8 tapitrisa sy sasany, Los Angeles miaraka amin'ny antsasa-manila, Chicago, Houston ary Philadelphia. Ny androm-piainana dia 88.6 taona.
Fantatrao ve fa firenena be mponina i Indonezia? Monina ao izy ireo Olona 268.074. Izy io koa dia misy ny tanàna be mponina indrindra eto an-tany: Java. Ny faritanin'i Indonezia dia 1.811.831 kilometatra toradroa. Ny tahan'ny zaza teraka dia 17.04 teraka isaky ny olona arivo ary ny androm-piainana dia 72.17 taona.
Ny tanàna misy mponina betsaka indrindra, ankoatran'i Java, dia Surabaya, Bandung, Medan, Semarang ary Palembang. Tsarovy izany Nososy i Indonezia any Azia atsimo atsinanana. Misy nosy 17 eo ho eo, enina arivo ny mponina, manodidina ny ekoatera. Ny nosy lehibe indrindra dia i Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, ny Nusa Tenggara Islands, ny Moluccas. Papua Andrefana sy ny ilany andrefan'i New Guinea.
Misy firenena amerikana iray hafa ao amin'ity firenena 5 voalohany be mponina indrindra eto an-tany ity ary i Brezila. Manana mponina 210.233.000 tapitrisa izy ary ny ankamaroan'izy ireo dia mipetraka eo amoron'ny ranomasimbe Atlantika satria ampahany tsara amin'ny faritany ny ala.
Ny faritanin'i Brezila dia manana 8.456.511 XNUMX kilometatra toradroa. Ny tahan'ny fahaterahana dia Fahaterahana 17.48 isaky ny olona arivo ary ny androm-piainana dia 72 taona. Ny tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena dia i São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife ary Porto Alegre. Goavana i Brezila ary manarona faritra tsara any Amerika atsimo. Raha ny tena izy izy no firenena lehibe indrindra eto amin'ny kaontinanta.
Ireo no firenena 5 be mponina indrindra eran'izao tontolo izao, saingy arahin'i Pakistan, Nizeria, Bangladesh, Russia ary Mexico. Mbola ao amin'ilay lisitra ihany koa i Japon, Filipina, Etiopia, Egypt, Vietnam, Congo, Germany, Iran, Turkey, France, Thailand, United Kingdom, Italia, South Africa, Tanzania, Myanmar, Korea Selatan, Spain, Colombia, Argentina, Algeria, Okraina…
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny firenena be olona indrindra eto an-tany